LOZAM- PIFAMOIVOIZANA TETO MAHAJANGA : Taksibe iray nifandona tamin’ny bajajy
Mbola anisan’ny fototra mampisy lozam-pifamoivoizana matetika eto an-tampon-tanànan’i Mahajanga ny Bajajy sy ny taksibe. 13 mars 2019
Ny talata teo dia taksibe iray indray no nandona bajajy teo amin’ny fiolahana mankany amin’ny bloc administratif. Araka ny nambaran’ireo nahita ny tranga dia efa nasaina nijanona ilay taksibe fa tsy fantatra na tapaka hisatra na tsia fa dia nandeha ihany ka nandona ilay bajajy.
Soa ihany tsy nisy olona tao anatiny ka tsy nisy ny naratra fa ny fahasimban-javatra no nisy. Efa misy moa ny vina hampanaraham-penitra ireo mpanao fitateram-bahoaka eto Mahajanga amin’ny alalan’ny fanofanana sy fakan’izy ireo ny ‘capacité’. Mbola eo am-panomanana kosa izy io fa mbola tsy mihatra hatreto.
Mpizahatany voatafika, vazaha vavy iray voatifitra, lasan’ny jiolahy ny vola 600 euros TSINGIN’I BEMARAHA (252) 20 mai 2019 Tamin’ny alalan’ny « Gps » no nahatrarana ireo jiolahy HALATRA MOTO TENY SOAVIMASOANDRO (194) 22 mai 2019 Nitsoaka ny fonja ilay tovolahy nitifitra azy TOVOVAVY IRAY MATY NISY NAMONO TANY TOLIARA (178) 22 mai 2019 Ravan’ny polisin’ny Fip ny tambajotran’ny mpamaky trano ny alahady 19 mey lasa teo TOAMASINA (160) 20 mai 2019 Mampihena ny tahan’ny olona mamonjy toeram-pitsaboana TSAHO MIELY MOMBA NY HOPITALIM-PANJAKANA (157) 20 mai 2019 Vehivavy iray tratran’ny fokonolona nangalatra sy namaky trano AMBALABE TOAMASINA (150) 23 mai 2019